Famakafakana ny fiovan'ny fikorontanan'ny toetr'andro eo an-davarangana
Isak'izay isa-minitra isan'andro, ny maso eny an-danitra dia manaloka ao amin'ny seranam-piaramanidin'ny masoivohom-baovaon'izao tontolo izao mandalina ny planeta sy ny atmosfera. Manome tahirin-tseranana tsy mitsaha-mitombo hatrany izy ireo amin'ny zavatra rehetra avy amin'ny rivotra sy ny tany, ho an'ny votoatin'ny hafanana, ny rafitra rahona, ny fiantraikan'ny loto, ny afo, ny ranomandry sy ny lanezy, ny habetsaky ny gripa matevina, ny fiovan'ny zavamaniry, ny fiovan'ny ranomasina , ary ny habetsahan'ny Fitrandrahana solika sy solika eo amin'ny tany sy ny ranomasina.
Ny fampiasana azy ireo dia ampiasaina amin'ny fomba maro. Isaky ny mahazatra ny tatitra momba ny toetrandro isan'andro, izay miorina amin'ny ampahany amin'ny zanabolana sy ny angon-drakitra. Iza amintsika no tsy nanamarina ny toetr'andro talohan'ny nialany niasa tao amin'ny birao na ny toeram-piompiana? Izany dia ohatra tena tsara amin'ny karazana "vaovao azonao ampiasaina" avy amin'ireny satelita ireny.
Meteo Satellites: Tools of Science
Misy fomba maro manampy ireo olona ireo ireo masoivoho manodidina ny Tany. Raha mpamboly ianao, dia azo inoana fa nampiasa an'io tahiry io ianao mba hanampiana ny fotoam-pambolinao sy ny fijinjanao. Ny orinasam-pitaterana dia miankina amin'ny antontanisa momba ny toetr'andro mba handehanana ny fiarany (fiaramanidina, fiarandalamby, kamiao, ary sambo). Ny orinasam-pandefasana, ny fitsangatsanganana fitsangantsanganana, ary ny fitaovam-piadiana ara-tafika dia miankina tanteraka amin'ny toetr'andro amin'ny toetr'andro amin'ny raharaham-piarovana. Ny ankamaroan'ny olona eto an-tany dia miankina amin'ny toetr'andro sy ny tontolo iainana noho ny fiarovana azy, ny filaminana ary ny fivelomany. Ny zava-drehetra avy amin'ny toetr'andro isan'andro mankany amin'ny fironana tandrefana dia ny mofo sy ny ronon'ireto maso mpanara-maso ireo.
Androany, fitaovana manan-danja izy ireo amin'ny fanaraha-maso ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro izay efa nambaran'ny mpahay siansa fa niakatra ny haavon'ny gazy karbonika (CO 2 ) amin'ny atmosfera. Mihamaro tokoa, ny angon-drakitra amin'ny zanabolana dia manome ny loha-laharana rehetra amin'ny fironana maharitra eo amin'ny toetr'andro, ary aiza no andrasana ny vokatra ratsy indrindra (tondra-drano, fiposahan'ny masoandro, vanim-potoana ririnina, oram-piarovana mahery vaika, ary toerana mety hisian'ny haintany).
Fijerena ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetrandro avy amin'ny Orbit
Raha miova ny rivotra iainan'ny planeta ho setrin'ny gazy karbonika be dia be sy ny grenady hafa tafiditra ao anaty atmosfera (izay mahatonga azy io ho hafanana), dia lasa ny vavahadin-tserasera mivadika ho an'ny zava-mitranga. Manome porofo mahery vaika ny fiovan'ny toetr'andro eo amin'ny planeta izy ireo. Ny sary, toy ny iray aseho eto ny fahaverezan'ny glacier any amin'ny National Park Glacier any Montana sy Kanada, no tahirin-kevitra mampiaiky indrindra. Milaza amintsika izy ireo rehefa mahita ny zava-mitranga any amin'ny toerana samihafa eto an-tany. Ny Earth Observing System NASA dia manana sary maro eto an-tany izay mampiseho ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro.
Ohatra, ny fandripahana ala dia hita amin'ny satelita. Azon'izy ireo atao ny manoritra ny endriky ny zavamaniry, ny fielezan'ny bibikely (toy ny voangory voangory voapoizin'ny faritra avaratr'i Amerika avaratra), ny vokatry ny fandotoana, ny faharavan'ny tondradrano sy ny afo, ary ny faritra misy hain-tany Mitranga izany loza izany. Matetika dia milaza fa ny sary dia milaza teny an'arivony; Amin'izao tranga izao, ny fahafahan'ny toetrandro sy ny tontolo iainana ara-pahasalamana hanomezany sary amin'ny antsipirihany dia ampahany manan-danja amin'ny mpahay siansa fitaovana ampiasaina mba hilazana ny tantaran'ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny zava-mitranga .
Ankoatra ny sary, dia mampiasa fitaovana fampiasa amin'ny atiny ny satelita haka ny hafanan'ny planeta. Afaka maka sary "thermal" izy ireo mba hampisehoana hoe iza amin'ireo faritra amin'ny planeta no mafana kokoa noho ny hafa, anisan'izany ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina. Ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany dia toa manova ny ririnay , ary azo jerena avy eny amin'ny habakabaka amin'ny endriky ny akoran'ny lanezy sy ny ranomandry.
Ny atmosfera vao haingana dia ampy amin'ny fitaovana ahafahan'izy ireo mandrefy amboara iraisana iraisam-pirenena, ohatra, ny hafa, toy ny Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) sy ny Orbiting Carbon Observatory (OCO-2) dia mifantoka amin'ny fikajiana ny habetsan'ny gazy karbôna ny atmosfera.
Ny vokatry ny fandinihana ny planeta
Ny NASA, ohatra iray, dia misy karazana toetrandro marobe izay mandalina ny planeta, ankoatra ireo mpitsidika (sy firenena hafa) mitazona ao amin'ny Mars, Venus, Jupiter, ary Saturn.
Ny fandinihana ny planeta dia ampahany amin'ny iraka misahana ny serivisy, toy ny an'ny Masoivoho Eropeana Eraopeana, ny fitantanana ny habakabak'i Sina, ny masoivohom-pirenena mpikaroka momba ny aterineto any Japon, Roscosmos any Rosia, sy ireo sampana hafa. Ny ankamaroan'ny firenena dia manana sehatry ny ranomasina sy atmosfera - any Etazonia, ny Fitondram-panjakana Nasionaly sy ny Ranomasina Atlantika dia miara-miasa akaiky amin'ny NASA mba hanome ny angon-drakitra ara-potoana sy maharitra momba ny ranomasina sy ny atmosfera. Ny mpanjifan'i NOAA dia ahitana sehatra maro amin'ny toekarena, miaraka amin'ny miaramila, izay miankina tanteraka amin'ny masoivoho satria miasa hiarovana ny morontsirak'i Amerika sy ny lanitra. Noho izany, amin'ny lafiny iray, ny toetr'andro sy ny tontolo iainana manerana izao tontolo izao dia tsy manampy fotsiny ny olona ao amin'ny sehatra ara-barotra sy manokana, fa izy ireo, ny angona omeny, ary ny mpahay siansa handinihana sy handaterana ny angon-drakitra, dia fitaovam-pifandraisana eo amin'ny firenena Fiarovana ny firenena maro, anisan'izany ny Etazonia
Ny fianarana sy ny fahatakarana ny tany dia ampahany amin'ny siansan'ny planeta
Ny siansan'ny planeta dia faritra manan-danja amin'ny fianarana ary anisan'ny fandinihantsika ny rafitry ny masoandro . Manao tatitra momba ny tontolon'ny atmosfera sy tontolo iainana izy (sy ny momba ny Tany, amin'ny ranomasimbe). Ny fandalinana ny tany dia tsy misy hafa amin'ny fomba sasany amin'ny fandalinana tontolo hafa. Ireo mpahay siansa dia mifantoka amin'ny ety an-tany mba hahatakatra ny rafitra misy azy tahaka ny fianaran'izy ireo Mars na Venus mba hahatakatra ny dikan'ireny tontolo roa ireny. Mazava ho azy fa zava-dehibe ny fandinihana ny etsy ambony, saingy ny vidin-javatra avy amin'ny orbit dia tsy voavidy. Manome ny "sary lehibe" izay ilain 'ny olona rehetra rehefa mandalo ny toe-javatra miova eto an-tany isika.
Ahoana no fomba fiasan'ny Astronauts ho an'ny toerana
Misy fanazavana momba ny Astronomie ho an'ny kintan'i Bethlehema?
Fanadihadiana ny Carina Nebula
Ireo harena selestialy ao amin'ny Constellation Centaurus
Ny tontolo Jovian an'ny Solar System
Raketa mavesatra sy ny hoavin'ny fiaramanidina
Ny fanadihadiana an'i Triton: Frigid Moon ny Neptune
Apophis: Ny Vatosoa Espaces That Started Panic
Astronomia, Sinoa, ary ny Oscars
Ny Hertzsprung-Russell Diagram sy ny fiainan'ny kintana
'Fianarana momba ny mari-boninahitra': Mpitsara Danforth
Fampitandremana ho an'ny fanoherana amin'ny teny Anglisy
MOREL - Faminaniana sy Tantaram-pianakaviana
Top '80s Songs of The Fixx
Fomba 4 mba hahazoana fitsapana tsara-Mpitarika
Safidy amin'ny teny anglisy amin'ny teny anglisy
Fampandrosoana ny foto-pinoana kristianina
Inona no atao hoe modifier diso?
Kilasim-baventy fototra ho an'ny Fianarana Level Mpianatra: Fizarana I: Lesona 1 - 9
Washington sy Lee GPA, SAT sy ACT Data
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny latina
Fitsaboana an-tserasera: TestDEN TOEFL
Ahoana no hamantarana ireo vato sy mineraly mahazatra
Fandinihan'ny Fitondram-panjakana - Tennessee
Ski Guide Clothing Buyer's Guide
Ady Persa - Battle of Salamis
8 Torohevitra momba ny famoahana ny fanamarihana avy amin'ny famakianao
Tipp of the Day: 179 Na izany aza, Na dia izany aza
Ny matoanteny mandika hoe "manontany"
Nahoana ianao no tokony hiteny tahaka ny anao sy ny fomba fanaovana izany
Jay Z vs Nas: Ny Story Behind the Feud
Grasshoppers, Crickets, ary Katydids, Order Orthoptera